Ugatsha Lwezempilakahle Luphawula Inhlelo Zebulenjini Ezigoqela iWebsite
HARARE — Ugatsha lwezempilakahle luphawule okusemthethweni inhlelo ezintathu zolwazi ezibalisa iwebsite, iDistrict health information database ( DHIS-2 ) kanye lombiko ophezu kokwenzakala endabeni zemikhuhlane enjengengculaza.
Lezinhlelo eziphawulwe ngoLwesine emkhosini owenzelwe e Harare International Conference Centre, zenziwe ngokusebenzelana kukahulumende weZimbabwe loweMelika.
Obengumhlonitshwa kulomkhosi ongenwe zinkokheli kwezempilakahle, abameli benhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ezibalisa i WHO kanye leye UNDP, umphathintambo wezempilakahle u Dr David Parirenyata uthi ziqakathekile lezinhlelo, ikakhulu iwebsite, emsebenzini wezempilakahle.
Ummeli weMelika kuleli umnumzana Bruce Wharton utshele abakade besemkhosini ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukuqhubeka ephathisana lele Zimbabwe ikakhulu kundaba zezempilakahle njengalokho ahlezi ekwenza ngaphansi kwesikhwama se PEPFAR.
I Studio Seven ikhulumisane lesinye seziphathamandla sogatsha olubona ngezokukhitshwa kwemibiko esigodlweni sommeli weMelika kuleli umnumzana Sizane Weza ochaze usuku lwalamuhla,njengosuku oluqakathekileyo kuhulumende weMelika,lapho kuphawulwa lezinhlelo ezintathu ikakhulu iwebsite.
Wengeza uWeza ethi lohlelo lweDistrict health information database -DHIS-2, luzaphathisa kakhulu ekuthini iphange imbiko ifinyelele lapho edingakala khona ngesiphangiphangi. U Weza uveze njalo ukuba loluhlelo yilo olusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele ngakho ukuphawulwa kwalo kuza ngesikhathi esiqondileyo.
Lokhu, uthi kuze ngemva kokuphathisana kwenhlanganiso ye Research Triangle International kanye le University ye Zimbabwe ngemva kokuba betholiswe amatshumi amabili ezigidi zamadollar– $20 million nguhulumende weMelika phansi kwesikhwama se Center for Disease Control.
Lumkhosi ungenwe zinkokheli zogatsha lwezempilakahle ilizwe lonke,umcebisi kamongameli kwezempilakahle u Dr Timothy Stamps,abenhlanganiso ezibalisa eye UNDP, eye EU, eye WHO, abehofisi ye Centre for Disease Control kanye lenkokheli ezivele enhlanganisweni ezilwela ilungelo loluntu ikakhulu kwezempilakahle.